desk ပြက္ခဒိန် | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan ,OEM,ODM-bestbusinessprinting.com
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan desk ပြက္ခဒိန် ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
Finish:လက်ျာဘက်၌ PP အပေါ်ယံပိုင်း(ဆိုရင်တော့ Matte) /နှစ်ဆဝါယာကြိုး binding/ဖြတ်တောက်သေဆုံး/ဖွဲ့စည်း
အဆိုပါ coated စက္ကူပုံနှိပ်ဖို့လျှောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်,စက္ကူချောချောမွေ့မွေ့နှင့်ရောင်ပြန်အလင်းဖြစ်၏,နှင့်အရောင်အဝါ,တောက်ပြောင်ခြင်းနှင့်တောင့်တင်းကောင်းပါတယ်.အရောင်ရွှဲပုံနှိပ်စဉ်အတွင်းမြင့်မားသည်,အရောင်တောက်တောက်များနှင့်တောက်ပဖြစ်ပါသည်,နှင့်စျေးနှုန်းလည်းပြားချပ်ချပ်နဲ့လူနီးကပ်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.bestbusinessprinting.com/my/desk-calendar.html